Ilo xoggagaala ayaa sheegaya in ay Arsenal dooneyso inay ciyaar yahanka Dusan Vlahovic ka dhigto mid ka mid ah ciyaartoyda ugu mushaarka badan England haddii uu soo cago dhigto Emirates stadium. | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Ciyaaraha Ilo xoggagaala ayaa sheegaya in ay Arsenal dooneyso inay ciyaar yahanka...
Ilo xoggagaala ayaa sheegaya in ay Arsenal dooneyso inay ciyaar yahanka Dusan Vlahovic ka dhigto mid ka mid ah ciyaartoyda ugu mushaarka badan England haddii uu soo cago dhigto Emirates stadium.
Arsenal ayaa lagu soo waramayaa inay doonayso inay Dusan Vlahovic ka dhigto mid ka mid ah ciyaartoyda ugu mushaharka badan Premier League haddii uu u soo dhaqaaqo Emirates Stadium bishaan.
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Serbia ayaa qaab ciyaareed cajiib ah ku soo bandhigay Fiorentina intii lagu jiray xilli ciyaareedkii 2021-22, isagoo dhaliyay 20 gool, waxaana uu diiwaan geliyay afar caawin 24 kulan oo uu saftay tartamada oo dhan.
Arsenal ayaa weli lala xiriirinayaa weeraryahankeeda dhexe, halka Juventus , Manchester City , Manchester United iyo Tottenham Hotspur ay sidoo kale xiiseynayaan xiligan.
Sida laga soo xigtay La Nazione , Gunners ayaa diyaar u ah inay 21 jirkaan ka dhigto mid ka mid ah ciyaartoyda ugu mushaarka badan Premier League haddii uu u dhaqaaqo kooxda.
Warbixinta ayaa sheegeysa in Vlahovic uu usbuuciiba ku qaadan karo 308,000 oo bound Waqooyiga London, laakiin weeraryahanka weli kuma qanacsana inuu u wareego kooxda Mikel Arteta .
Geesta kale Fiorentina ayaa lagu soo waramayaa inay dooneyso inay iska iibiso weeraryahanka bishaan si ay u xaqiijiso inay ku helaan lacag aad u sareysa, laakiin Serbian-ka ayaa doorbidaya inuu sugo ilaa dhamaadka ololaha inuu baxo.
Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Linkedin Email Print Viber Kyiv (Caasimada Online) – Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa Isniinti shalay aheyd sheegtay in lasii daayay ilaa 348 arday oo Soomaali ah oo...
Deg Deg Hoggaamiyaha TPLF oo u Hanjabay Farmaajo Iyo Mustafa Cagjar...
Sida ay Manchester United u wajihi karto Southampton.
Al-Shabaab oo gudaha u gashay dalka Kenya, kadibna weerar ku dishay...
DEG DEG: Korneylkii hogaaminayey Badbaado Qaran, Cusmaan Xaadoole oo xildhibaan loo...
Milkiilaha kooxda Chelsea Roman Abramovich ayaa doonaya inuu iibsado Koox Cusub.